Rosia: Arahaba tratry ny tsingerintaona ry @KremlinRussia! ;) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2010 18:38 GMT
Tamin'ny 14 Septambra 2010, nankalaza ny faha 45 taonan'ny vaninandro nahaterahany ny filoham-pirenena rosiana. Ity no tsingerintaonany fahatelo nankalazaina nandritra ny naha-filoham-pirenena azy, ary azo antoka noho izany fa naharay antso an-tariby maro izy avy amin'ireo mpiasam-panjakana mitana toerana ambony sy avy amin'ireo filoham-pirenena vahiny namany nandritra ny taona maro lasa. Tamin'ny taona 2010, nitobaka ny firariantsoa sy ny fiarahabana avy amin'izao tontolo izao, ary ny anjatony tamin'izany dia avy tamin'ny … Twitter!
Nanomboka tamin'ny volana Jona lasa teo i Medvedev no nampiasa ny kaonty Twitter-ny , raha izy nitsidika ny lemak'i Silicon iny. Manana kaonty manokana roa voamarina amin'ny fomba ofisialy izy : @KremlinRussia (bitsika amin'ny teny Rosiana ) sy ny @KremlinRussia_E (Bitsika amin'ny teny Anglisy ). Misy ihany koa ny kaonty @blog_medvedev, izay mandefa fotsiny ireo lahatsoratra bilaogin'ny Filoha tonga isan'andro. Raha niha-nanatomotra ny andron'ny 14 Septambra, nanjary lasa aretina ny “teny” hoe fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Medvedev, ka nanosika ny maro hilaza ny firariantsoany sy ny toroheviny.
Ary indrindra fa i Nikita Belykh (@NikitaBelyh [RUS]), Governoran'ny faritr'i Kirov izay nilaza ny vaovao roa herinandro lasa izay niaraka tamin'ny Tweet-o-enthusiasm:
Somary nandalina kokoa mikasika ny taorian'ny lanonana ny @Dunya89 [RUS] :
Nandefa karatra Tweet manokana avy any UK i @flowersandfun :
[Ho an'ireo izay tsy dia mbola zatra amin'ireo fomba fitenin'ny aterineto, toroako hevitra ianao jereo eto.]